Ninka Gaalka La Siiyay “CALAN GUBE” | Voice Of Somalia
Ninka Gaalka La Siiyay “CALAN GUBE”
Posted on May 8, 2016 by Voice Of Somalia Image
Guyaashii kacaankii Daraawiishtu gumaysiga la dagaalmayey, nin kasta oo gaalada necbaa ama la col ahaa meel kasta ha joogee, wuxuu u kacay xaruntii Daraawiisheed, si uu garab iyo gaashaan uga helo, iyaga ha la dagaal-galo ama dab iyo duunyo haka soo qaato oo iskii haw dagaal galo e.
Abbaaraha 1905tii, ayaa xarunta oo Ayl deggan, waxaa yimid nin la oron jiray, Xaaji Cali Faahiye Geeddi, magaala ahaanna reer Qandala ahaa. Xarunta wuxuu ninkaa keenay dhowr qori oo hadiyad ah. Sayidkii hadduu ninka raganimadiisa iyo waxtarkiisa u bogay wuxuu yiri, “Nala joog oo xarunta ha ka tegin, af iyo uurba waxaad ka rabtana waan ku siinayaa.” Xaaji Cali wuxuu yiri, “Soo gaddoonkayga dambe waxay noqotaba, haatan dab ay Darawiishtu ku dagaalgasho aan doono.”
Xaaji Cali aabbihiis wuxuu ahaa maalqabeen mood iyo noolba hodon ku ah, madaxda magaalada Qandalana wuu ka mid ahaa, boqorka iyo raggiisana xiriir adag buu la lahaa. Xaaji Cali markuu tegay Qandala wuxuu arkay bandiirad Talyaani oo ka taagan daartii aabbihii. Hadduu dadka wareystay waxaa loo sheegay in boqorka iyo Talyaanigu ku heshiiyeen in magaala kasta oo boqorka taliskiisa raacsan laga taago calan Talyaani.
Xaaji Cali Darwiish buu ahaaye wuxuu ku dhaqaaqay inuu taa wax qabto, dabadeed calankii buu la soo dcgay, dab ku riday oo gubay. “Dhugi meel dhaantay, dhex socotana dhul dhaantaye,” niman baa u tegay Talyaanigi, oo ku yiri nin Xaaji Cali la yiraahdo ayaa calankii Talyaaniga u saarnaa Qandala gubay. Dabadeed Talyaanigu wuxuu u ergooday boqorkii iyagoo ku doodaya in boqorku axdii jebiyey. Boqorku wuxuu guddoonsadey in Xaaji Cali la soo qabto oo Talyaani gacanta loo geliyo – si ay uga abaal-mariyaan wuxuu falay Xaaji Cali dareen baa galaye wuxuu wuxuu tegay Boosaaso. Axmed Taajir oo boqorka walaalkiis ahaa ayuu “magannimo Allaa lehe” weydiistay inuu magan u noqdo.
Rag tab iyo xeelad kama dhamaatee, waraaq buu u qoray Sayidka oo wuxuu ku qariyay maro bafto ah oo saddex dhudood leh, wuxuu u sii dhiibay nin safar wata oo la oron jiray Cabdi Cali Guuleed oo Sayidka u jaal u ahaa. Xaashida wuxuu Sayidka ugu tafa tiray wixii dhacay iyo waxa la damacsan yahay. Markab Talyaani ah ayaa muddo ka dib soo dhigtay marsada Boosaaso. Talo qarsoon, qoolad iyo xeelad baa jirtaye, Xaaji Cali waa la qabtay, Talyaanigii baana la guddoonsiiyey markaasaa markabkii lagu qaaday. Si uu ku ogaadeyba Sayidkuna waraaq buu u diray Bastaloosi oo ahaa ninkii Talyaaniga qareenka uga ahaa Afrikada Bari iyo Cadan. Warqaddaa wuxuu Sayidku ku yiri, ii imow aan wada xaajoonnee. Taasoo filanwaa ku noqotay wakiilkii Talyaaniga, si degdeg ah buu u yimid usagoo fuushan markabkii Xaaji Cali ku xirnaa. Kolkuu soo degay oo yimid daartii Daawad, salaan iyo bariidana la is-dhaafsaday, Sayidkii wuxuu yiri, isagoo iska dhigaaya in looga warramay xagga Eebbe weyne, “Cali Faahiye Geeddi mee?” Bastaloosi oo inuu qariyo ka xishoonaya ayaa yiri, “Markabkuu ku jiraa.” Sayidkii wuxuu yiri, “Degdeg waa in loo soo dejiyaa.” Talyaanigii waa ka dooday oo wuxuu yiri, “Ninkaasu xumaan buu falay, laba dowladood baana isu dhiibay, adiguna shaqo kuma lihid.” Sayidkii wuxuu yiri, haddaan degdeg loo keenin adiga iyo ragga kula socdaa tegi meysaan, usagaana u curaaran tihiin! Intaan laba tuke is eegin, ayaa caarad iyo cargaagtan ciidankii Daraawiishta camal guhaahooday. Danbaa tiriye haddana intaan diqsi loo xiiran, ayaa Xaaji Cali Faahiye Geeddi la soo taagey Sayidka hortiisu. Sayidku markuu Xaaji Cali gacanta midig qabtay wuxuu yiri:
Ninka gaala la siiyey Talyan loo garbo duubay
Markab guudka la saaray, gacal sow ma lahayn?
Waxa gaalada siiyey, garacdii Bah-dir weeyoo
Gadhkiisoo la jaraana, ma gooyaan dhammidood!
Warka gaaray islaanoo, geyigoo dhan dhammeeyey
Giddi reer tolku ceebta, guudka sow kama saarna!
Qoladii Alla gaabshoo, gaasiroo fara weydaa
Gabbaraa ogaadee, reer Calow lagu guursaye
Ma gabdheydin tihiiney? Dhirtu waa laba geed
Waa galoolo isdhaafayoo, mid haddii la gunguumo
Kan kalaa godol noolba, godin loo rabiyaayee
Waxa loo gabbinaayo, Alla sow ma garataaneey!
Hadday guulo baxayso, geesigii la ogaa
Ninkii u gabri doona, hadba waa gujiyaayoo
Gundhiyaa hinqiyaayoo, geesi looma bareeree
Waxa loo garbinaayo, Allow sow ma gartaaney!
Mowdku waa gar Ilaahoo, geeri Eebbe ma diidnee
Waxaanan ka gam’aynin, Cali Faahiye Geeddi
Waa sidey u galeeneey!
1. Cali Faahiye Geeddi: Waa ninkii calanka Talyaaniga Qandala ku gubey.
Abdirahman Mahdi: ‘Ethiopia is now boiling’ TALK TO AL JAZEERA
GABAY:-Sheekh Aadan Sunne – “Arli Baan Ahay Maanta”